Memor Stick တစ်ချောင်းနှင့် HACKING လုပ်ခြင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » Memor Stick တစ်ချောင်းနှင့် HACKING လုပ်ခြင်း
Memor Stick တစ်ချောင်းနှင့် HACKING လုပ်ခြင်း
Posted by Wai Phyoe on Jan 25, 2012 in Computers & Technology, Copy/Paste, Creative Writing, Education, Myanma News, News, Photography, Society & Lifestyle |5comments
stick နဲ့ hack လို့၇တယ် သတိထားဖို့
အ၇င်တစ်ခေါက်တုန်းက ပာက်ကာတွေဘယ်လိုပာက်လဲ ဆိုတဲ့ပို့စ်ကိုတင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ အဲ့တုန်းက ကျွန်တော်က ခုခေတ်မှာ hacking software တွေပေါ်လာတဲ့အတွက် hacker တွေလွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ စေတနာ နဲ့လူတွေအားလုံးသတိထားနိင်အောင်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုတစ်ချို့လူတွေက ၇ွဲ့သလို ၇ိ့သလို လေးတွေပြောသွားတဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဆက်ပြီးသတိပေးသွားမှာပါ။
ခုတင်လိုက်တဲ့ ပို့စ်ထဲက Hacking နည်းက ၁နှစ်သားကလေးတောင် ပာက်တတ်တယ်ဆို၇င်ယုံမလားတော့မသိဘူး။ ဖတ်ပြီး၇င်တော့ယုံသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၁။အခုခေတ်မှာ USB stick နှင့် အချက်အလက်များ password များကို ခိုးနေတဲ့သူများ ရှိကြပါတယ် . အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ကွန်ပျူတာကို keylogger များ ရန်မှ ကင်းဝေးပြီ ဆိုတာနဲ့ပဲ မိမိ password များကို အခိုးခံရမှုအတွက် စိတ်ချရသွားပြီလို့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ . အခုတစ်နည်းနဲ့လဲ အခိုးခံသွားရ နိုင်ပါတယ် . အခုနည်းက usb stick ကနေ တစ်ဆင့် မိမိ အချက်အလက်များကို ယူသွားနိုင်ပါတယ် . နံပါတ်(၂) USB thief ဆိုတဲ့ program လေးဟာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပါ . ဒါပေမယ့် မိမိရဲ့ အချက်အလက်များကို ခဏလေးနဲ့ ခိုးယူနိုင်တဲ့ program တစ်ခုပါ . USB တစ်ချောင်းကို ကွန်ပျူတာထဲ ထိုးထည့်တာနဲ့တင် အဲ့ဒီ့ကွန်ပျူတာမှာ သုံးတဲ့ password မှန်သမျှဟာ အကုန်လုံး အဲ့ဒီ့ usb stick ထဲကို ရောက်ပါတယ် . browser ကနေ website များကို ၀င်သမျှ username and password အားလုံးက အဲ့ဒီ့ stick လေးထဲကို ရောက်သွားပါတယ် . အဲ့ဒါကြောင့် ဆိုင်တွင် ကွန်ပျူတာ သုံးမည့်သူများ သိထားသင့်တာက မိမိကွန်ပျူတာသုံးတော့မယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီ့ကွန်ပျူတာမှာ usb stick များ မိမိမသုံးခင် ထိုးထားမထားကို စစ်ဆေးပါ . တွေ့ရင် ဖြုတ်ပစ်ကြပါ . ဆိုင်ရှင်များကလဲ မိမိက အသုံးပြုသုအပေါ်ကို ရိုသေတယ် ၊လေးစားတယ်ဆိုရင် မိမိကွန်ပျူတာမှာ usb stick များကို မထိုးနိုင်အောင် အခုဒီ aio tool ထဲမှာပါတဲ့ usb stick remover များထဲက တစ်ခုခုနှင့် ပိတ်ထားပါ . stick ထိုးသုံးချင်တဲ့သူ လာရင် အဲ့ဒီ့ stick ကို စစ်ဆေးပြီးမှ အသုံးခံပါ . ဒါဟာ မိမိက မိမိဆိုင်မှာ လာသုံးမည့် customer များကို take care လုပ်လိုက်တာပါပဲ . လာသုံးမည်သူများရဲ့ stick ကို ဖွင့်ပြီးတော့ usb thief program ထည့်ထားမထား စစ်ဆေးပေးပါ . စစ်ဆေးလို့တွေ့ရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ . နောက်ရက်မှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးဝင်ပုံကို ပြန်ရှင်းပေးပါ့မယ် .
ကဲ အပေါ်ကဟာတွေထဲမှာ program ရှစ်မျိုးရှိပါတယ် . (no.2)USB thief ကတော့ 2009 ခုနှစ်ထုတ်ပါ . USB stick နှင့် အချက်အလက်များကို ခိုးယူတဲ့ program တစ်ခုပါပဲ . နောက်ထပ် ရှိပါသေးတယ် . အလျင်းသင့်ရင် သင့်သလို တင်သွားပေးပါ့မယ် . တစ်ခြား program တွေကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပါပဲ usb stick များ မိမိ pc မှာ လာထိုးလို့မရအောင် usb port များကို lock ချထားမယ်မယ် . ပိတ်ထားမယ် . ကဲ သုံးကြည့်လိုက်ပါ . အသုံးပြုနည်းကိုတော့ ရေးမပေးတော့ပါဘူး . သုံးတတ်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် . လွယ်ပါတယ် သုံးကြည့်ပါ ။
သမျးကို ဟက်ချင်ရင်တော့ ပြောဂျနော့
ဟာ့ဒစ် တစ်လုံးလုံး ကလုံးရိုက်ပေးလိုက်မယ်
လိုင်းကောင်းတဲ့ software လေးများမရှိဘူးလား
လိုင်းကောင်းတဲ့ software တော့မကြားမိဘူးဗျ အဲ………ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော့်ကတော့ ဘယ် website ကိုပဲကြည့်ကြည့် http://www.polysolve.com ကနေတစ်ဆင့်ဝင်ကြည့်တယ် အဲ့ကောင်က ဘန်းထားတဲ့ web တွေကိုဖြည်ပေးတယ်။အဲ့တော မြန်သလိုလို၇ှိသွားတာပေါ့။စက်မြန်ချင်၇င်တော့ Tune Up ကိုသုံးဗျ
နောက်ပြီး hack လို့၇တဲ့ software name တွေတင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာလဲ hack ဖို့ပာုတ်ဘူးဗျ
polysolve က တားတို့ကို ပေးမသုံးစေချင်ဘူးထင်တယ် ဘန်းထားတယ်ဂျ
နောက်ထပ်လည်း မျှဝေပေးပါအုံးဗျ …
ကျနော်တောင်ရေးတတ်သဗျာ autorun.inf ခံပြီးရေး ရင် ရတယ် ..လိုချင်တဲ့ data patch ကိုဝင်နှိုက်ရုံဘဲ autorun enable ပေးထားမယ်ဆိုရင်ပေါ့ …..